လင်္ကာ: ခင်ရွှေလှိုင်သို့ ...(ညီညီ)
ခင်ရွှေလှိုင်ကိုခင်မင်ဖူးတဲ့ရဲဘော်ရဲမေတဦးအနေနဲ.အကြံပေးလိုတာကဘယ်အရာကိုမှမိမိသမိုင်း ကြောင်းနဲ.ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်တွယ်ဖက်မနေပါနဲ.။အမှန်တရားကိုတွေ.ပြီသိပြီဆိုတာနဲ.ရဲရဲဝန်ခံပြီး အဖြစ်မှန်တွေကိုဖွင့်ချပါ။ကိုယ်အဖမ်းမခံရပြီးရောဆိုပြီးအခြားသူတွေအဖမ်းခံနေရချိန်မှာဖာသိဖာသာနေ နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အရှက်တရားထားပြီးမကဒတရဲ.ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပြန်လည်ဆေးကြောခြင်း၊မကဒတ မျက်နှာဖုံးအောက်မှာရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျုးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ပေးပါ။အနည်းဆုံးတော့ကိုယ်ရဲ.မျိုးဆက်ကလေးတွေအနေနဲ.လူ.ဘဝထဲရဲရဲဝံဝံနဲ.သူများတွေမျက် နှာကိုကြည့်ရဲတဲ့ သူတွေ ဖြစ်လာပါလီမ့်မယ်။
ခင်ရွှေလှိုင်ရဲ. comment ထဲကလူ ၅ ယောက်လောက်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို.ဆိုတော့ ကျန်တဲ့လူ ၁၀၀ကျော်မတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာ။သေတဲ့သူ၄၀လောက်ထဲက၃၅ယောက်လောက်ကတော့အပြစ်မဲ့ သူတွေပါလို. ခင်ရွှေလှိုင်ဝန်ခံ လိုက်ပြီပေါ.။ အဲဒီတော့GOSDAရုံးကနေပြီးနိုင်ငံရေးလုပ်သွားတဲ့သူ တဦးကမိခင်အဖွဲ. အန ကလရဲ.ဥက္ကဌကဦးစီးပြီးလူသတ် ပွဲ၊နှိပ်စက်ပွဲ လုပ်ခဲ့တာကိုတော့ လက်ပိုက်ပြီး ကြည့်နေခဲ့တာ။ အနှစ်၂၀ကျော်ဘာမှမပြောပဲနေခဲ့တာလိပ်ပြာသန်.ပါသလားလို.မေးချင် ပါတယ်။
နောက်ပြီးသံခဲနဲ.ပက်သက်ပြီးသူယူထားတဲ့နေရာ၊သူမြောက်ပိုင်းနဲ့ ပက်သက်ခဲ့မှုတွေအတွက်သူပြန်ပေး ဆပ်ခဲ့တာကရာဇဝတ်မှုတွေကို လက်ပိုက်ထိုင်ကြည့်ပြီးနှုတ်ပိတ်နေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပိုင်းမှာ တယောက်နဲ.တယေက်အပြစ်ပုံချပြီးကိုယ်လွတ်ရုန်းဖို.ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေအကြောင်းခင်ရွှေလှိုင်ပိုသိမှာ ပါ။အမှန်ကိုမြင်ပြီးပူးပေါင်းလာ မယ်ဆို ရင်(ကိုယ်တိုင်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျုးလွန်ထားတာမရှိလို.)အားလုံး က ခွင့်လွတ်နိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ခင်ရွှေလှိုင်အပါအဝင်မည်သူမဆိုရာဇဝတ်မှုဖော်ထုတ်ရေးအတွက်ပူးပေါင်း လာကြမယ်ဆိုရင်ကြိုဆိုပါ တယ်။နောက်တခါတောင်ပိုင်းမှာထပ်မံခြီမ်းခြောက်ခြင်းခံနေရတဲ့ကျနော်တို. ၇ဲ.သေဖော် သေဖက် ၃ ဦးကို လည်းခင်ရွှေလှိုင်ရဲ.ခင်ပွန်းမှတဆင့်အကာအကွယ်ပေးဖို.ပြောဆိုပေးပါ။
ရာဇဝတ်မှုအသစ်တွေထပ်မဖန်တီးကြပါနဲ.တော.။ များများလုပ်ထားတဲ့သူတွေကတော့များများအပြစ်ခံရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့နည်းနည်းပဲလုပ်ထားတဲ့သူတွေကတော့နည်းနည်းပဲခံရမှာဖြစ်ပြီဲး အလျှင်းသင့်ရင်ခွင့်လွတ်မှုကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။
မေးစရာလေးကျန်သွားလို.မေးကြည့်ပါရစေ။ခင်ရွှေလှိုင်ကဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရင်စပိုင် ၅ ယောက်လောက်တော့ ရှိလီမ့်မယ်ဆိုတော့အဲဒီသံသယရှိတဲ့ စပိုင် ၅ ယောက်ရဲ.နာမည်လေးကို တဆိတ်လောက် POSTမှာ တင်ပေး စမ်းပါ။ဒီမှာကျန်ခဲ့တဲ့လူ၁၀၀လောက်ကဝိုင်းစုံစမ်းကြစစ်ဆေးကြ လုပ်ကြပေမဲ့ အနှစ် ၂၀ ကျော်တဲ့ အထိ တယောက်မှမပေါ်လို.ပါ။ဒါပေမဲ့ မကဒတ ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ.မှာ ပါခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ မသင်္ကာံ စရာ လူတွေနဲ.ပေါင်း၊အဖွဲ.တွေနဲ.ပေါင်းပြီး မသင်္ကာံစရာအလုပ်တွေ လုပ်နေကြနေလေရဲ.။ ခင်ရွှေလှိုင်ဆက်ရေးမဲ့ POST တွေကိုဆက်ဖတ်နေရအုံးမယ်လို.မျှော်လင့်နေတဲ့ ……………………